Iran: Diyaar baan u nahay in aanu wajahno cadawgeena | Goojacade
Home War Iran: Diyaar baan u nahay in aanu wajahno cadawgeena
Maalin uun kadib markii rasaas lagu furay agagaarka aagga cagaaran ee magaalada Baghdad, halkaasi oo u dhaw safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay dalka Ciraaq ayaa abaanduulaaha ciidamada Iran Ali Hajilou sheegay in Mareykanka iyo cadawga Iran aysan awood u lahayn in ay dalkooda ka adkaadaan.
Waxa uu carrabka ku adkeeyay in haatan uu Mareykanka uusan lahayn awood milatari oo u ku weeraro Iran, arrintaasi oo ay sida oo kale toodobaadkii hore ka dhiidhiyeen ciidamada Kacaanka Islaamka ee Iran.
“Mareykanka waxaa uu Iran kula dagaalamayaa warbaahinta oo uu adeegsanayaa in uu Iran cabsi geliyo”.
Hadalkaan ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo saaray digniin ku socota Iiraan, isaga oo sheegay in haddii labada dal uu dagaal ka dhex qarxo ay burburin doonaan Iiraan.
“Hadii ay Iiraan doonayso in ay dagaallanto waxaa ay taasi rasmi ahaan noqon doontaa dhammaadka Iiran,” waxa uu sidaasi ku sheegay qoraal uu bartiisa Tweetarka soo dhigay Axaddii.
“Mar dambe uma gooddin dooonaan Mareykanka!”ayuu intaa ku daray
Balse qoraalkan uu soo saaray Mr Trump ayaa ah isbaddal cusub isaga oo dhawaan beeniyay suurtagalnimada dagaal dhexmara labada dhinac.
Maalmo ka hora ayay ahayd markii uu madaxwayne Trump sheegay in Mareykanku uusan doonayn in cadaadiska Iiraan uu isu baddalo dagaal.
Mar ay wariyayaasha Khamiistii waydiiyeen in Mareykanku doonayo in uu dagaal la galo Iiraan waxa uu ku jawaabay, Mr Trump: “waxaan rajaynayaa maya.”
Previous articleSharcigii Batroolka Soomaaliya oo maanta la ansixiyey
Next articleKenya miyey waddaa Olole ballaaran oo ka dhan ah Soomaaliya?